Amelia Lost: Ubomi kunye nokungahambi kwe-Amelia Earhart
Amelia Lost: Ubomi nokungahambi kwa-Amelia Earhart nguCandace Fleming ngumfihlelo ongabonakaliyo. Yintoni eyenzekayo kumqhubi owaziwayo u-Amelia Earhart kwi-bid yokubhabha kwihlabathi? Waphi na? Kwaye kutheni ukutshatyalaliswa kwayo kusinomdla kuthi eminyakeni engama-75 kamva?
Isishwankathelo sika- Amelia Lost
E- Amelia Lost , umbhali wezobuchwephesha uCandace Fleming ulandela imisebenzi yakhe eyaziwayo kwi-PT Barnum, iLincolns kunye no-Eleanor Roosevelt ngokubukeka okuthakazelisayo kwi-aviatrix Amelia Earhart .
Uphando olucwangcisekileyo lukaFleming ludibanisa nobuchule bakhe bokubhala ibali ukulungiselela i-akhawunti ye-Earhart ekwazi ukuphefumula ubomi kwi-disappearing. Nangona umfundi eyazi ukuba u-Amelia akazange abuyele kwindleko yakhe ebulalayo, isakhiwo sencwadi kunye noFleming's pacing kudala ukwakha uxolo kunye nokudala uxinzelelo.
Iingxelo ezibhalwe ngababhali ezivela kwiimbono zabantu abaninzi abachaphazelekayo malunga no-Amelia apho ahlala khona kunye neengxelo zeminyaka yakhe yokuqala kunye nemisebenzi yakhe, evumela umfundi ukuba azi Amelia njengomntu obalaseleyo. Ndiyincoma uAmerica Lost: Ubomi nokusabalalisa kuka-Amelia Earhart iminyaka eli-10 nangaphezulu.
Uninzi lwama-biographies we-Earhart olujoliswe kubaphulaphuli abancinci lubhekiselele kubuntwaneni bakhe obumnandi be-Kansas kunye nomnqweno wakhe wokuba ngumqhubi ngexesha apho abafazi bengakhuthazwa ukuba banyuke kwi-cockpit kwaye batyekele ubomi babo.
Kodwa uFleming ubamba ubuncinci ebusheni buka-Earhart kwaye akaxubulanga nje kuphela ukuphuma kwakhe, kodwa kunye noxinzelelo lukayise kunye nezinye iingxaki zeentsapho. Iminyaka engumtsha ka-Amelia ibonakaliswe yimpembelelo "yokugula" kayise kunye nemiphumo eyayinayo emsebenzini wakhe.
Usapho luka-Amelia lufudukela e-Atchison KS ukuya eKansas City, Des Moines, eSt.
UPawulos kwaye ekugqibeleni iChicago kunye nokunyuka kwesinye kwanyathelo eliphantsi kwezinga lentlalo. Imizamo yeekholeji yase-Amelia yahlakazeka kwaye yayinentliziyo. Emva koko wavolontiya njengomongika eCanada ngexesha leMfazwe Yehlabathi I waza wamangaliswa yizindiza kwindawo ye-airfield eseduze. Kodwa okokuqala ukhuthaza ukuba ibhabhise babethetha ngokuba bhinqa abavunyelwe ukuba baleke. Njengoko wathi "Akunjalo nomfazi jikelele" avunyelwe ukuthatha emoyeni.
Ngethuba u-Amelia Earhart wabuyela eUnited States, wayesele ebethelwa yi-bug flying. Ukuthakazelisa kwakhe kwanda emva kokuya kwimbonakalo yomoya eCalifornia ngowe-1920 kwaye wazimisela ukufunda ukuhamba. Wayesebenza kanzima ukuze athole imali eyaneleyo yezifundo kwaye wafumana umqhubi wesifazane ozimisele ukumthatha njengomfundi. U-Amelia ekugqibeleni wafumana indawo yakhe esibhakabhakeni. Umlobi uchaza ngemizamo yokuqala ka-Amelia njengomqhubi kunye nokuba waba ngowokuqala njani ukuba ahambe e-Atlantic, kwaye ubonisa ubudlelwane buka-Amelia noGeorge Putnam ngendlela efanelekileyo. Unika umfundi iinkcukacha ezithakazelisayo malunga nokuzimisela kuka-Amelia ukuba ngumntu woluntu kunye nemizamo yakhe yokukhuthaza abafazi kwi-aircraft.
Kodwa amabali anyanzelisayo kule ncwadi yile ngxelo yokuhamba kwakhe kokugqibela kuka- Amelia Earhart kunye nemizamo enkulu yokumfumana emva kokuqhagamshelana nayo yalahlekelwa yinqwelo yakhe ngoJulayi 2, 1937.
Umbhali ukhangele iifowuni zonxibelelwano kunye namabali eendaba, kunye namaxwebhu aphambili ahanjiswe kwiQela lamazwe ngamazwe okubuyiswa kwemibonakalo. La maxwebhu aquka ukungena kwidayari kunye neengxelo zeengxoxo ezivela kubemi abathi babevile u-Amelia ecela uncedo kwiiyure zokugqibela.
Amelia Lost : Incomo yam
Ndiyincoma uAmerica Lost: Ubomi Nokusabalalisa kuka-Amelia Earhart iminyaka eyi-10 nangaphezulu. Incwadi inokuningi ukunikela ngokubhekiselele kwiminqweno yabafundi abatsha kunye nolwazi lwembali.
Ngokuqhawula amabali amaxesha okugqibela kaM Amelia esiwaziyo ngombali wobomi bakhe, uCandace Fleming akakhethi kuphela umdla, kodwa naye wenza umfundi ngokukhawuleza kunye nokubaluleka kokunyamalala kuka-Amelia. Ibhuku lephepha le-118 lizaliswe ngezithombe, izinto zeendaba kunye neememorabilia ezivela kwikhasi lebakala lika-Amelia ukuya kwintsimi eya ku-Amelia evela kumqhubi wakhe, uFred Noonan.
Le ncwadi ibandakanya ibrafiography, index kunye namacebiso ngolwazi olungakumbi kwiWebhu.
Abafundi abafuna ulwazi malunga nobomi buka-Amelia Earhart ngenxa yeengxelo baya kufumana ingqalelo yolwazi lwezobomi kulo msebenzi. Abafundi abancinci befuna incwadi enomdla engeyiyo inkohliso malunga nomxholo othakazelisayo uya kuhambelana nale nto ibonakalisa ubomi buka-Amelia kunye nokunyamalala kwayo. Bambisana oku nge -Roaring 20: Uhambo lokuqala lwe-Air Cross for Women by Margaret Blair (i-National Geographic, 2006) ukukhuthaza amabali athile abaqhubi abahamba phambili.
Ngomlobi uCandace Fleming
UCandace Fleming ubhale iincwadi ezininzi kubafundi abancinci bevela kwiincwadi ezithandwayo ze- Muncha, Muncha, Muncha ukuya kwi-biography eyinkohlakalo. I-Lincolns: I-Scrapbook Jonga u-Abraham noMariya. Ukhawuleza udibanisa uthando lwakhe lwembali kunye nokukwazi kwakhe ukubandakanya abafundi abancinci kakhulu kwiincwadi zemifanekiso ezisemgangathweni ezifana neebhokisi zeKatje kunye ne -Big Cheese kwiNdlu ye-White House: Inyaniso Eyinyaniso yeCheddar evelele . UCandace Fleming uye wabhala iincwadi zeengcamango zabafundi bezikolo zaseprayimari, kuquka i -Fabled Fourth Graders ye-Aesop School . Ingxelo yakhe ka-2011 ka-Amelia Earhart ngumsebenzi wakhe oshicilelweyo wama-26. (Umthombo: Webhusayithi esemthethweni yeKandace Fleming)
Isihloko: Amelia Lost: Ubomi Nokusabalalisa kuka-Amelia Earhart
Umbhali: uCandace Fleming
Umshicileli: I- Schwartz & Wade Books, Imprint ye-Random House Children's Books, A Division of Random House, Inc.
Upapasho loNyaka: 2011
Izibonelelo ezongezelelweyo kumaBakala aphakathi kweBakala abanobudala
Ukuba ngabafundi bakho bebakala eliphakathi babenandipha inkolelo yamandulo, khangela uluhlu lwam olufundwayo oluchaziweyo, oludibaniswe nezibuyekezo, kwi- Award-Winning Historical Fiction yabafundi bamaBanga aphakathi .
Ulungiswe 4/29/16 ngu-Elizabeth Kennedy
"INdlela" nguCormac McCarthy - Uhlaziyo lweNcwadi
"Indlu yeDolli" Isifundo soBuntu: uNksz Kristine Linde
Abaxhasi kunye neZiseko
I-Diplomatic Revolution 1756
Indlela yokufaka ubungqina bokuPhucula nokuHlola ii-Essays zeKholeji